Dal Muslim ah oo sheegtay inuu howlgal qarsoodi ah ka fuliyey gudaha Israel (Arrin ay ku marmarsootay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dal Muslim ah oo sheegtay inuu howlgal qarsoodi ah ka fuliyey gudaha...
Dal Muslim ah oo sheegtay inuu howlgal qarsoodi ah ka fuliyey gudaha Israel (Arrin ay ku marmarsootay)
(Hadalsame) 03 Maajo 2022 – Taliyaha Guud ee Guutada Quds ee Ilaalada Kacaanka Iiraan, Jeneraal Esmail Ghaani, ayaa shaaca ka qaaday in Iiraan ay fulisey howlgal ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka kaasoo ka dhacay Israel, sida ay ku warrantay Arab Post.
Sida laga soo xigtey Arab Post, warbaahinta Iiraan ayaa ku warrantay in Ghaani uu sheegay in 41 diyaaradaha dagaalka ee Israel ihi ay ku guuldareysteen inay qabtaan laba diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo ay Iiraan leedahay oo fuliyay howlgalka.
Ghaani waxa uu intaa ku daray in Israa’iil ay qiil fashilkeeda uga dhigtay inay samaynaysey dhoollatus millateri.
“Waxaa idiin wanaagsan inaad ku laabataan waddamadii asalka ahaan aad ka timaadeen inta ay goori goor tahay,” ayuu Ghaani ka digey, isagoo la hadlaya Israa’iil.
Waxa uu intaa ku daray: in “in ka badan 70 sano, Israa’iiliyiintu ay ku guuldareysteen inay noqdaan qaran midaysan. Waxaana jira bar madow oo cunsuriyadeed oo gaartey meeshii ugu sarreysay (Israa’iil).”
Dhanka kale, Taliyaha Ilaalada Kacaanka Iiraan, Hassan Salami, ayaa isna dhankiisa sheegay, in “Israa’iil ay iskeed iskugu diyaarineyso shuruudihii ay ku burburin lahayd nafteeda.” isaga oo tixraacaya gardarrada ay ku hayso Falastiiniyiinta, Suuriya iyo Iiraaniyiinta.
Previous articleXog dheeraad ah oo kasoo baxaysa gabar aroosad ahayd oo lagu diley magaalada Hargaysa
Next article“Farxad ayaan la ilmeeyey dadaalka ay xaaskaygu samaysay dartii” – Sheekooyinka Ciidda